रसद ढुवानी लेबल, कस्टम मेलिing र शिपिंग लेबल निर्माता - क्रिस्टल कोड
के तपाईं आकर्षक कस्टम शिपिंग लेबल खोज्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईं लेबलको लागि बजारमा हुनुहुन्छ जुन तपाईंको बजेट सम्झौता बिना प्राप्तकर्ताको ध्यान लिनेछ? क्रिस्टल कोडमा विभिन्न प्रकारका विकल्पहरू छन् र यी धुरी-प्रमाण आत्म-स्टिक लेबलहरूको लागि विभिन्न रङहरू छन्। हामी उपहार प्रमाणपत्रहरू पनि प्रस्ताव गर्दछौं जुन तपाईंले व्यक्तिलाई एक भन्दा राम्रो मनपर्ने स्टेशनरी चयन गर्ने स्वतन्त्रतालाई अनुमति दिनुहुन्छ।
तपाईंको प्याकेजहरू कस्टम मुद्रित शिपिंग लेबलहरूसँग भीडबाट खडा बनाउनुहोस्। विभिन्न आकार र सामग्रीमा प्रीमियम-गुणस्तर ढुवानी लेबलको हाम्रो संग्रहबाट छनौट गर्नुहोस् .हाम्रो शिपिंग लेबल म्याट व्हाइट, ग्लोसी व्हाइट, क्राफ्ट ब्राउन, क्लियर फिलिम र व्हाइट फिलिम सहित प्रीमियम लेबल स्टकको विभिन्न प्रकारमा आउँछ।
क्रिस्टल कोडमा आफ्नो प्रिन्ट शिपिंग लेबल छान्नुहोस्
मेलिङ्ग लेबलहरू तपाईंको ग्राहकको पहिलो प्याकेज, पदोन्नति, वा पत्राचार हो। उनीहरूले तपाईंको मेललाई व्यक्तिगत र व्यावसायिक रूप दिन्छन्। ग्राहकहरू प्रचारक वस्तुहरू पठाउँदै र समाचारहरू तिनीहरूसँग जोड्न एक राम्रो तरिका हो, तर तिनीहरूलाई तपाईंको मेल खोल्नको लागि अवरोध हुन सक्छ। हाम्रो प्रिन्ट मेलिंग लेबल र अनुकूलन शिपिंग लेबुलको साथ तपाईले देख्नको लागी तपाईंको संभावना बढाउन, ग्राहकहरु लाई सम्भावनाहरू परिवर्तन गर्न र क्लाइन्टहरू लाई तपाइँको कम्पनीको गुणस्तर र वर्गसँग सम्बद्ध गराउन सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ।
हाम्रो निजीकृत मेलिंग लेबल धेरै फरक रंग, डिजाइन, र विषयवस्तुहरूमा आउँछ। हामी उद्योग-विशिष्ट विकल्पहरू प्रदान गर्दछौं, जसमा धेरै कानूनी अनुकूलन ढुवानी लेबलहरू र अनुकूल मेलिङ लेबलहरू समावेश गर्दछौं। हामी अतिरिक्त रूपमा छुट्टी छुट्टी मेलिंग लेबलहरू प्रस्ताव गर्दछौं।
शिपिंग र मेलिङ लेबल मुद्रणको साथ राम्रो ब्रान्डिङ निर्माण गर्नुहोस्
तपाईंको संकुलहरूमा मुद्रण ढुवानी र मेलिंग लेबलहरू मुद्रण गरेर राम्रो छाप बनाउनुहोस्। तपाईंको कम्पनीको व्यवसायिक जानकारी समावेश गर्नुहोस् र विवरणहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस् तपाईंको ग्राहकहरूलाई फिर्ता मेल पठाउन सजिलो बनाउनका लागि, थप अधिक आदेश वा थप अन्वेषणको लागि।
कट-आकार-आकार मेलिङ लेबलहरू व्यक्तिगत रूपमा 25-ले न्यूनतम प्रिन्ट मात्रामा लेबलहरू हुन्। यो 70 lb स्टिकर पेपरमा छापिएको छ, चमक, म्याट वा उच्च-चमकको साथ। आकार दायरा 1.5 "x 2.5" बाट9"x 12" बाट गोलाकार कोनेहरू छन्।
रोल मेलिङ लेबलहरू विशेष रूपमा थोकमा आवेदनको लागी डिजाइन गरिएको हो किनभने तिनीहरू रोलमा राखिन्छन्। यो सजिलै संग हात वा एक डिस्पेनर द्वारा लागू गर्न सकिन्छ। मानक आकृतिहरू आयताकार, वर्ग, गोलो र ओवल हुन्। अनुकूलन ढुवानी लेबल मुद्रण पनि तपाईंले चाहानु भएको कुनैपनि आकार संग उपलब्ध छ। तिनीहरू सेतो प्रिमियम स्टिकर पेपर, BOPP (सेतो, चाँदी, वा धातु) मा प्रिन्ट गरिएको छ, वा बनाइएका कागज (सेतो वालम, सेतो राखिएको, वा क्रीम राखिएको)।
CCSCD0464"x 6" कार्टन लेबलहरू
CCPPDT085 हवाईअड्डा सामानको ट्याग
CCUSS050 8.5 "x 11" अमेरिकी मानक एक्सप्रेस शिपिंग ...